Bahlala ngoloyiko abahlali baseMarikana – Elitsha
12th July 2018 Phinda KulaCape Town, Iyavela 0 Xhosa
Umama kamfi uNtombosindiso Thuthani nodade wabo uNobendiba. Umfanekiso ngu Phinda Kula
Kuqhutywa uphando malunga neziganeko zokubulawa kwabantu kwindawo yogibityholo iMarikana ePhilippi. Ngabantu ababini abathe badutyulwa ngaphakathi kwityotyombe elithile. Isithethe samapolisa eNtshona Koloni uFrederick Van Wyk uthi amaxhoba aphakathi kweshumi elinethoba namashumi amabini eminyaka ubudala. Uthi elinye ixhoba ladutyulwa emlenzeni ze labalekiselwa kwisibhedlele esikufuphi. Kungokunje kuvulwe ityala lokubulala.
Kwesinye isiganeko sodubulo ngumzimba wedyongwana eneshumi elinesixhene leminyaka ubudala owafunyanwa unamanxeba okudutyulwa entloko kwindlela iKlipfontein eMarikana ngomhla wamashumi amabini anethoba kwinyanga ephelileyo. OkaVan Wyk uthi nakwesi isiganeko kuqhutywa uphando lobulala nanjengoko kungekho barhanelwa sele bebanjiwe kweziziganeko zozibini. Kukholeleka ukuba ezizinganeko ziphenjelelwa ngamaqela onqevu.
Usapho lakwaThuthani eMarikana liphantsi kwelifu elimnyama yaye lihlala phantsi koloyiko emva kokuba unyana welikhaya edutyulwe entloko wabhubha kwisithuba seveki ezimbini ezidlulileyo eMarikana. Ngokwengxelo yelikhaya umfi uYamkela Thuthani udutyulwe ngamadoda angaziwayo kwikhaya lomhlobo wakhe. Kudizwa ukuba uYamkela wagxagxanyiswa liqela lamadoda ukuba abakhombise apho kuhlala khona umhlobo wakhe nekutyholwa ukuba ebengunqevu ntonje ebezama ukuphuma emva kokuba umfi uYamkela Thuthani wamkhuza ngelithi akulunganga ukuba azibandakanye namaqela oonqevu.
“Ndoyikisela ubomi bam nabantwana bam ababini kuba andiyazi nokuba ababulali bonyana wam abanakundivingcela bandibulele kwaye ngoku ndifuna indawo ekhuselekileyo endingahlala kuyo “utshilo Ntombosindiso Thuthani ongunina kaMfi.
Lenkosikazi iyavuma ukuba unyana wakhe ebesele eyekile ukutshaya iziyobisi. Uthi umzimba wakhe bawufumana ugqunywe ngamahlahla kufuphi nendawo yamangcwaba eMarikana. Ixhoba belineshumi elinesixhenxe leminyaka ubudala(17) nekulindeleke ukuba libekwe kumadlala oyisemkhulu eLower Mcuncuzo kuCofimvaba, eMpuma Koloni ngomhla weshumi elinesine kule iphezulu(14 Eyekhala 2018).
Ngokwengxelo abarhanelwa bakhaba ucango kwikhaya lomhlobo wabo nobezama ukuziguzula kwizenzo ezigwenxa nalapho kudizwa ukuba bafika badubula ixhoba entloko neqabane lakhe ekurhaneleka ukuba layibeka esibhedlele inqawa ze emva koko umkhonwekati bawujolisa kuYamkela Thuthani nekudizwa ukuba ebengehambiselani nezenzo ezingalunganga.
Abahlali bathi iMarikana ibuyela kulameko yokubulawa kwakho kwabantu ziyaqala kwakho. Le yindawo edume kakubi ngokubulalwa kwabantu nanjengoko kunyaka ophelileyo ingabantu abaqikelelwa kumashumi amabini abantu abadluliswa amafu kwisithuba senyanga enye. Kwisiganeko esehle kutshannje ngomhla wamashumi amabini anethoba kweye Silimelela (29 Eyesilimela 2018) kudutyulwe kwabulawa abantu ababini nekukholeleka ukuba owesithathu wafumana ukwenzakala.
Ukubulalana kwindawo yogobityholo